Vaovao - Taratasy kaopy plastika Zero dia nahazo mari-pahaizana momba ny zezika azo simba TÜV
Tamin'ny 25 May, ny filoha lefitra zokin'ny TÜV Rheinland Greater China dia namoaka mari-pankasitrahana momba ny zezika indostrialy DIN CERTCO sy Eoropeanina Bioplastika Association ho an'ny Taratasy Indostrialy APP Sinar Mas Group.
Ny vokatra voamarina dia ny kaopy Zero Plastika® namboarina farany tamin'ny APP Sinar Mas Group Industrial Paper. Izy io dia voamarin'ny TÜV Rheinland miorina amin'ny fenitra DIN EN13432: 2000-12 sy ASTMD6400: 2019-01. Miaraka amin'ny fahazoana ny taratasy fanamarinana azo simbaina compostable, dia maneho ny vokatra marika Zero Plastic® izay nandalo tanteraka ny fanandramana sy ny fanamarinana ireo fikambanana manankarena anatiny sy avy any ivelany (fanamarinana fanimbazimbana azo zakaina, fitsapana fiarovana ny poizina biolojika, fitiliana fluorine POP, fitiliana fifindra-monina voafaritra, sns. .).
Eo ambanin'ny fameperana vaovaon'ny firenena amin'ny plastika sy ny fandraràna plastika, ny kaopy taratasy, kitapo, boaty fisakafoanana, sns novokarin'ny vokatra marika Zero Plastic® an'ny APP Jinguang Group dia azo averina alamina anaty polpa-taratasy na zezika. Ny fahatsapana ny fampiasana betsaka indrindra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny loharanom-pahalalana, fa tsy ny fandoroana sy ny fanotofana tany, dia vahaolana tena izy hanampiana ny tsy fitongilanan'ny karbaona sy ny fihenan'ny gazy karbonika.
Ny pulping sy ny papermaking maoderina dia "tsingerina lehibe" maitso sy maharitra, ary ny famokarana, ny fanjifana, ny fanodinana ary ny fametahana taratasy eo ambanin'ny marika ZeroPlast® dia mamorona "cycle" kely, mitahiry hazo betsaka ho an'ny tany. Amin'ny maha-mpitarika manerantany amin'ny fanaovana paozy sy fanaovana papermaking, ny APP dia vonona hiara-hiasa hamorona fampandrosoana maharitra ny ekolojia eto an-tany ary hahasoa ireo taranatsika any aoriana.
① Ny fisakanana sakana fiarovana ny tontolo iainana EPP dia manome ny velarana taratasy hanana fananana sakana tsara sy famehezana hafanana. Tsy mitaky fanodinana PE izany. Izy io dia mety amin'ny fanaovana mivantana ny karazan-kaopy taratasy, vilia taratasy, boaty fisakafoanana, barika lasopy ary fonosana sakafo hafa alaina. Vahaolana fonosana tsara sy azo antoka kokoa momba ny tontolo iainana;
② Tsy misy plastika, tsy misy mpiasan'ny fluorescent, azo haverina amin'ny laoniny tanteraka (azo esorina mivantana), azo simbaina (100%), azo zezika, azo antoka ary sariaka amin'ny tontolo iainana, mifanaraka amin'ny firoboroboan'ny fitaovana maoderina amin'ny fonosana;